मेमोरी यार्ड | आरोहण गुरूकुल | विराटनगर
मिती : २०७५ फागुन १९
नेपाली राजनैतिक वृत्तमा धेरै परिवर्तन भयो । नेपालीहरुले पटक–पटक भिन्‍न–भिन्‍न परिदृश्य देखे । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तन भयो तर त्यसले मानवीय समवेदना, हाम्रोपनको विकास, कला, सँस्कृति र न्यायको विषयमा भने जहिल्यै प्रश्नचिन्ह छाड्यो । यूवाहरु परिस्कृत भइरहे । पारिवारिक, वैयक्तिक र सामाजिक रुपमा देखिने र नदेखिने असर पर्नुका कारण हाम्रो समाजिक मान्यता, सँस्कृति, धर्म र राजनैतिक कुराहरु हुन् भन्‍ने कुरालाई नकार्न सकिदैन भन्छ नाटक । पात्रहरु मृत्यूको भयसँगै यात्रा गर्छन् । जीवनलाई मूल्यहीन दख्नुको कारणहरु खोज गर्छन् । यस्तै कुराहरुले जेलिएका स्मृतिहरुको यार्ड हो नाटक मेमोरी यार्ड ।
नाटकमा प्रयोग गरिएका मेटाफोरहरुले धेरै कुराको खोज गर्ला सायद । जीवनको बुझाईको खोज गर्दा पात्रहरु कतै हराउँछन्, कतै देखिन्छन् र जीवनको अस्तित्वको मन्थनमा उनीहरु शून्यतालाई बढि जोड दिन्छन् र सलेब्रेसन गर्छन् ।
वर्तमान समयमा मानव जातिको अस्तित्व के कसरी देखिन्छ ? जुन सपना मानिसले देख्छ र त्यो पूरा नहुँदै कतै विलुप्त हुन्छ, किन ? नाटक एब्सर्ड जनरामा प्रस्तुत गर्न कोशिस गरिएको छ ।
नाटक लेख्नु-निर्देशन गर्नु मेडिटेसनजस्तै लाग्छ । आफू बाँचेको समयसँग नजिकबाट परिचित हुनु, घटना र पात्रहरुसँग साक्षात्कार गर्न पाउनु मेरो सौभाग्य हो । मलाई नाटकले पहिले आफ्नो लागि अर्थ राख्छ झैँ लाग्छ, जसले बनाउँछ । त्यसपछि अरु । यो नाटक हेरिरहँदा तपाईँको मनमा धेरै कुरा चल्न सक्छ । नाटक नै हैन जस्तो पनि लाग्न सक्छ । मैले देखेका कुरा केही फरक ढङ्गले देखाउने प्रयत्न गरेको छु । मलाई नाटक बनाउन सघाउने, लेख्न प्रोत्साहित गर्ने सबैप्रति ऋणी छु ।
Writer & Director: Che Shankar
0 comments on “मेमोरी यार्ड”